N’ihi na weebụsaịtị dị iche iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe kachasị m mma nwere ike ọ gaghị adị mma maka gị. Peeji mmeghe nke 5 – 20 kacha enye ndị ọbịa weebụ nwere ike ịba uru maka ndị na-achịkọta ndepụta ịzụ ahịa; ezigbo ndị ahịa chọrọ ịzụta ASAP web host ga-achọ nkọwa ndị ọzọ.
site ogologo ndepụta nke nnabata anyị, Ahọpụtawo m 10 ụlọ ọrụ weebụ kachasị mma:
Orice „ga-enyocha ha n’otu’t nu weotu tulee ụzọ ha si dị iche na ibe a.
1 10 Companii ọrụ Bochum kachasị mma nke Web: Pro-vs-Cons & Verdict
2.5 8. Nmalit Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
2.5.1 Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum Dị ka ọbịa maka ndị edemede, nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV gị ma ọ bụ qualite „njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe, njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ọnụ ala bụ ihe kachasị mkpa na ona naịaị. Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na-enye ihe kachasị dị ọnụ ala (0,80 $ / mo na ndebanye aha). Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihe dị ọnụ ma ha were ebe nrụọrụ weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma. Bochum kachasị mma maka Ndị Ọrụ Marea Britanie: Kinsta, SiteGround Iji ghọta i na-eme onye web web kasị mma maka otu ọnọdụ, ị dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị. Kedu ihe nkwụsị?
2.5.2 Gini simplu nsogbu eji egbu egbu?
2.5.3 Gazda web Yabụ kedu kacha mma maka weebụsaịtị Marea Britanie?
2.6 12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaezia & Singapur
10 Companii ọrụ Bochum kachasị mma nke Web: Pro-vs-Cons & Verdict
Ụlọ ọrụ nchịkwa dabeere na LA nke edobere na 2001. Nwee ma jikwaa Web Bochum Hub.
Mwepụta: 3,99 USD / lună
Ike: 5,99 USD / lună
Kwa: 13,99 USD / lună
Cheia atụmatụ: Gratuit ngalaba, na-akparaghị ókè nchekwa, email ozi, auto-SSL, drag-na-dobe ụlọ ọrụ, 90 ụbọchị ego azụ nkwa.
Ejiri Sunil Saxena în Todd Robinson în 2001 în totalitate Bochum nke Mmasị. Ọlọ ọrụ ahụ na-enwe ọfịs at Los Angeles, CA, Virginia Beach, VA Denver CO, Yana Data datelor din Los Angeles, CA, na Ashburn, VA.
Ha nwekwara ma jikwaa Web Bochum Hub na ubu a na-eji ihe karịrị 300 ọrụ na ha ụlọ ọrụ.
InMotion Bochum, în cazul în care nu am reușit să nu-l notoăm.
InMotion Bochum anọwo na egwuregwu Bochum ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 – ndekọ ogologo azụmahịa ha gosipụtara na ha bụ otu nime ndị na-eweta Bochum kachasị mma n’ahịa.
Ihe ole na ole na-eme InMotion Bochum na-apụta bụ sava ejiri ha (nke na-enweta mgbe niile> 99.98% optime) nu eigbo ndị nkwado ha. Ọ bụrụ na ị nu erau nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ, nkwado ndị ahịa ha na-adị ngwa ngwa ịzaghachi.
Nkwado ndị ahịa 100% nime ụlọ.
Viruslọ na mejeụtara nyocha malware.
Gbalịa ịchọta naanị 0,01 $ ọnwa mbụ (coodu dere: WHSRPENNY)
Interserver nwekọrịta Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ na obere azụmahịa. Maka ụlọ ọrụ testa ibu na ebe nrụọrụ weebụ nwere okporo ụzọ dị arọ – sava ndị ọrụ VPS na NJ ha na-enye ezigbo mgbanwe.
Ntọala na 2004 site-ul na otu ndị enyi na mahadum. Ụlọ ọrụ na Bulgaria, Italia, Spania, Regatul Unit, na Statele Unite.
Mmalite: 3,95 USD / lună
Cheia atụmatụ: CMS ọrụ CMS wuru n’ime, e-mail ozi, HTTP / 2 ani, Ka Encrypt Wildcard SSL.
E site-ul SiteGround în 2004 site-ul nostru a fost permis în Sofia, Bulgaria. Taa, ụlọ ọrụ ahụ bụ Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, na Nikolay Todorov.
Ụlọ ọrụ ahụ emeela ka ndị ọrụ 400 jiri ọrụ ndị dị na Bulgaria, Ịtali, Spania, Regatul Unit, na Statele Unite ale Americii. Nu aveam 6 date de date în Statele Unite, Olanda, Regatul Unit, în Singapore.
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ siri ike, SiteGround bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ole na ole na-agbalịsi ike ịnye ọrụ ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya site na atụmatụ ndị ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ịkwụ ụgwọ maka ịmegharị ọhụụ nwere ike ịtụle obere mgbago, ọ bara uru ọfụma maka ogo mba ndị ị na-enweta na nloghachi. Echere m na SiteGround dabara adaba maka ndị ọchụnta ego na ndị na-ede blọgụ ọkachamara na-achọ ngwọta nnwere onwe-enweghị nsogbu.
Site completGround nyochaa ebe a
Ndị ọrụ ọ bụla na-achọ este gazdă ecologică, newbies, onye na-ede blọgụ, ndị ọchụnta ego pere mpe, ndị ọrụ mmefu ego, ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Guzosie ike 2004, Hostinger ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego na-agba ọsọ n’ọtọtụ ebe data n’ụwa niile.
Ekekọrịta Naanị: 0,99 USD / lună
Akaụntụ Ekekọrịta: 2,89 USD / lună
Ikekọrịta Ahịa: 3,99 USD / lună
Atụmatụ cheie: Gratuit ngalaba, newbies-enyi na enyi na saịtị na-ewu ụlọ, ọnụ ala .xyz ngalaba, dị ala ọnụ òkè Bochum atụmatụ.
Ugbu a onyeisi ụlọọrụ Arnas Stuopelis na-ach guzkwa ya, e totul de la Hostinger în 2004 dị ka ụlọ ọrụ "Bochum Media" nke bootstrapped na Kaunas, Lituania. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ha malitekwara 000Webhost, ọrụ ntanetịime weebụ n’enweghị mgbasa ozi.
N’agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na-emefu ego, Hostinger nu a existat 8 centre de date dụ n’akụkụ ụwa nile Singapore ụh mgbakwunye ọhụrụ ha. A na-edekwa ha na mba 39 ma bụrụ onye na-edeba aha na ICANN zuru oke.
Kemgbe ha malitere, Hostinger și-a adăugat ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a maara nke ọma na-akwado 29 ndị ọrụ na nkezi 20,000 ọhụrụ ọrụ ntinye aka kwa ụbọchị na 2017.
Isi ihe ga-eme ka ha nwee ọganihu? Inye ụda nke njirimara njirimara na obere ọnụahịa (otu n’ime ndị dị ọnụ ala na ahịa, lee okpokoro) maka ndị ọrụ ya.
Newbies, ndị na-ede blọgụ, ndị obere ụlọ ahịa na ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ mmefu ego, ndị nweere onwe ha, ndị na-anaghị akwụ ụgwọ, ndị na-ahụ maka weebụsaịtị, nd Crụ eCommerce, ụlọ ahịa n’ịntanetị, na nnukwu ebe nrụọrụ weebụ.
În 2007, TMD Bochum a pus la dispoziție Bochum niile: Partajat, Reseller, VPS Cloud, WordPress Managed, în Raara Onwe.
Atụmatụ Atụmatụ: 2,95 USD / lună
Atụmatụ azụmahịa: 4,95 USD / lună
Nyenu ahia: 7,95 USD / lună
Cheia atụmatụ: Ngalaba a na-akwụghị ụgwọ, Weebly dị njikere, ikpe 60-ụbọchị n’efu, NGINX, Ka anyị Criptați WildCard SSL, coodu nkwụghachi ụgwọ pụrụ iche “WHSR7”.
Site-ul nostru a dat date în Statele Unite și în Statele Unite în baza datelor esențiale în Amsterdam, o dată pe piață TMD.
Bochum TMD na-enye atụmatụ Bochum dị iche iche, ụnyere nkekọrịta, reseller, VPS, igwe ojii, njikwa WordPress, na ọrụ Bochum raara onwe ya.
TMDHosting ezughị oke mana ana m akwado TMD Bochum maka ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ obere azụmaahịa na-aba etiti na-achọ ngwọta weebụ Bochum pụrụ ịdabere Ọ bụghị naanị na ha na -tụ arụm, mana ha nwekwara ụfọdụ ndị otu nkwado ahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-atụle atụmatụ Amalite Ijekọ, M ga-atụ aro ka ị gaa maka Ụlọ Ahịa Atụmatụ dị ka ụgwọ dị ogologo oge bụ ihe ọzọ ma ọ bụ karịa (8,95 $ / mo vs 9,95 $ / mo) mana -enwe ezigbo mma arụ ọrụ nkesa na ikike.
Ezigbo aha – Fanii na-eche nche na ebe niile.
Ie omuma nkwado zuru oke.
WP Dị Mkpa: 17 USD / lună
WP Geek: 77 $ / cuțit
Cheia atụmatụ: Ngalaba .blog n’efu, profaịlụ HTTP / s & NGINX, akwụkwọ SSL n’efu, XPX 100 + isiokwu WP, Jetpack Personal / Ọkachamara gụnyere.
Ụnụ ego ọganihu bara uru (40% ego nkwụnye).
Ị dịghị 24 × 7 dị ndata nkata ma ọ bụ nkwado ekwentị.
Ndịọrụ niile nke ndị Exabytes dị n’aka ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, WPWebHost malitere njem ha na 2007 ma na-eche iji nye ndị ọrụ ihe dị mkpa na nkwukọrịta nkà na ụzị makaeb.
Nu am fost date ọrụọ date în Denver, Co, în Singapore iji nye ọsọ ọsọ ọsọ na US Pacific Asia.
WPWebHost bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ntanetị weebụ dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Asia na mgbe ha nọ na azụmahịa kemgbe 2007, ha na-anọgide na-enye ego na asọmpi ọnụahịa n’ihi na ha WordPress.
Otú ọ dị, ngwa ngwa ha na-aza ọsọ ọsọ na ọrụ ndị ahịa na-enweghị ego bụ ihe isi nchịkwa nke ị nere were ike ịchọrọ tupu ị banye.
Gụọ nyocha zuru ez WP Web Host
Nchedo Firewall + DDoS na atụmatụ niile.
Ido ndozi akụrụngwa.
N’ihe banyere òkè web hosting,-na-enwekarị oke na ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị ịnerew ike ịnabata kwa akaụntụ dabere na atụmatụ. Ihe ndekọ Bochum VPS enweghị ikike ngalaba mana nkewapụrụ iche na atụmatụ niile nwere.
CompanieWeebụsaịtị nke 1Ebe nrụọrụ weebụ 2-10 ọbịaUnlimited nrụọrụ
3,99 USD / cuțit 5,99 USD / cuțit 13,99 USD / cuțit
4,00 USD / cuțit 4,00 USD / cuțit 4,00 USD / cuțit
3,95 USD / cuțit 5,95 USD / cuțit 11,95 USD / cuțit
2,95 USD / cuțit 5,95 USD / cuțit 11,95 USD / cuțit
0,90 USD / cuțit 2,89 USD / cuțit 3,99 USD / cuțit
3,92 USD / cuțit 4,90 USD / cuțit 9,31 USD / cuțit
2,95 USD / cuțit 4,95 USD / cuțit 7,95 USD / cuțit
3,00 USD / cuțit 17,00 USD / cuțit 77,00 USD / cuțit
CompanieNtinye nbanyeMid LevelAdvanced
17,99 USD / cuțit 29,99 USD / cuțit 49,99 USD / cuțit
18,00 USD / cuțit 30,00 USD / cuțit 54,00 USD / cuțit
80,00 USD / cuțit 120,00 USD / cuțit 160,00 USD / cuțit
20,00 USD / cuțit 40,00 USD / cuțit 80,00 USD / cuțit
12,95 USD / cuțit 29,95 USD / cuțit –
25,00 USD / cuțit 35,00 USD / cuțit 50,00 USD / cuțit
29,97 USD / cuțit 52,97 USD / cuțit 62,97 USD / cuțit
400,00 USD / cuțit 900,00 USD / cuțit 1.500,00 USD / cuțit
29,00 USD / cuțit 49,00 USD / cuțit 69,00 USD / cuțit
Mara – atụmatụ atụmatụ VPS (iị dị ka) nkọwapụta: ọkwa ntinye – 4 GB Ram, nchekwa 75 GB; N’etiti etiti – 6 GB Ram, nchekwa 150 GB; Di elu – 8 GB Ram, nchekwa 250 GB. InterServer nu este nhazi ihe nkesa na-agbanwe agbanwe dị ka ha nwere / jikwaa etiti data ha ma na-enye ngwọta nnabata nke colocation.
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Global ~ 500 ms
Atụmatụ niile Turbo (nkekọrịtakọrịta) ma ọ bụ karịa Atụmatụ niile Global ~ 500 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile Global ~ 200 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile SUA na Eshia ~ 700 ms
Atụmatụ niile Naanị na Bochum WP achịkwa Ee ee achọrọ nhazi NE & eu ~ 450 ms
Node.js nnabata na-ebido naanị 3,70 USD / mo na A2 Bochum.
Imirikiti ndị web na-ahụ maka weebụ anaghị enye ihe dị ukwuu n’ụzọ nke ndị nrụpụta maka akaụntụ nnabata. A2 Bochum na Interserver bụ ndị a na-adịghị ahụkebe na-eme. Maka ndị na-ele anya VPS Bochum, a na-ahazi ọtụtụ gburugburu.
Pịa ebe a iji gaa A2 Bochum / Pịa ebe iji gaa Interserver.
Zoo Kaị Kasị Mma WordPress Bochum face Ndị Ọrụ Di elu: Kinsta, SiteGround
Înscrieți-vă și nu lăsați WordPress, site-ul nostru n-a-ịbịa oge mbụ ruo ndị ahụ maara nke ọma na ha nwere ike hazie ụrụ WordPress nke ha. Thismara nke a, ndị nnabata web na-enyekwa ụdị atụmatụ dị iche iche yana atụmatụ WordPress nke akọwapụtara dịka optimizer plugins. Atụmatụ WordPress jisiri bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ nduzi a na-eduzi. Enwere ụfọdụ ndị ọbịa na-enwekwa ndị ọkachamara WordPress dị ka ndị ọrụ nkwado.
CompanieEjiri WordPressNkwado ọkachamara na WPAtụmatụ WordPress pụrụ iche
BoldGrid – Onye wuru sa WordPress
Staging, WP-CLI, A2 kachasị – ngwa mgbakwunye pụrụ iche maka arụmọrụ kachasị mma
Bochum Weebụ kacha mma maka edemede: GreenGeeks, Hostinger, TMD Bochum
Ihe Nlereanya – Bochum ekerịta Bochum na-ebido naanị 0,80 USD / lună – Zuru okè maka ndị nweere onwe ha chọrọ websaịtị dị mfe.
Maka ndị edemede, ịhọrọ onye web web na-azọpụta oge bụ ihe kachasị mkpa. Onye na-ewu saịtị dị mfe (itinye saịtị na idozi ya ngwa ngwa), webmail (ka gị na ndị ahịa na ndị mbipụta wee kwurịta okwu), na ọnụahịa ọnụ ala (isi ahịa gị na-ede) bụ ihe Choro.
3,99 USD / cuțit
4,00 USD / cuțit
3,95 USD / cuțit
2,95 USD / cuțit
0,80 USD / cuțit
3,92 USD / cuțit
29,00 USD / cuțit
3,00 USD / cuțit
25,00 USD / cuțit
8. Nmalit Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ maara na itinye ego maka mbu bụ naanị akụkụ nke ụgwọ ha na-efu. Nke a bụ n’ihi ihe dị iche iche dịka ọnụego nnabata. Imirikiti ndị na-eweta ụlọ ọrụ weebụ na-enye ọnụọgụ nbanye ego nke siri ike iguzogide. Agbanyeghị, ọnụahịa na-arị elu nke ukwuu mgbe oge iji mee ka atụmatụ gị dị ọhụrụ. Mgbe ị na-agụ ihe ọghọm web nwere ike ị ga-akwụ, buru n’uche nke a dịka akụkụ nke atụmatụ gị.
CompaniaNtinye ^ Ọhụrụnkwa
3,99 USD / cuțit 9,99 USD / cuțit Oge ikpe 90 n’efu
4,00 USD / cuțit 4,00 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
3,95 USD / cuțit 11,95 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
5,95 USD / cuțit 14,95 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
2,15 USD / cuțit 11,95 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
3,92 USD / cuțit 7,99 USD / cuțit Oge obula ego azu
4,95 USD / cuțit 7,95 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
60,00 USD / cuțit 60,00 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
27,00 USD / cuțit 27,00 USD / cuțit Oge ikpe 100 n’efu
29,00 USD / cuțit 29,00 USD / cuțit Oge ikpe 30 n’efu
Dị ka ọbịa maka ndị edemede, nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV gị ma ọ bụ qualite „njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe, njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ọnụ ala bụ ihe kachasị mkpa na ona naịaị.
Maka ndị na-eleta naanị otu weebụsaịtị, Hostinger na-enye ihe kachasị dị ọnụ ala (0,80 $ / mo na ndebanye aha). Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihe dị ọnụ ma ha were ebe nrụọrụ weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma.
Bochum kachasị mma maka Ndị Ọrụ Marea Britanie: Kinsta, SiteGround
Iji ghọta i na-eme onye web web kasị mma maka otu ọnọdụ, ị dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị.
Latitude bụ oge ntanetị nke sava na-anata ma na-ahazi arịrịọ onye ọrụ simple.
Were ya dị ka ụgbọ elu – Mgbe ndị ọrụ Bekee rutere websaịtị a na Australia, arịrịọ ya na – esi Anglia – Orientul Mijlociu – Asia – Australia – Asia – Orientul Mijlociu – Anglia ịlaghachi nsonaazụ. Oge ụgbọ elu bụ laten nke weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụrụ na a na-akwado weebụsaịtị ahụ na Anglia, arịrịọ ndị ahụ ga-agbaba n’ime Anglia naanị, belata oge njem.
Iji hụ otu esi enyocha ihe na ndụ n’ezie, bụ otu ihe atụ.
N’afọ ndị gara aga, saịtị a ị na-agụ bụ nke a na-anakwere na data data în Statele Unite. N’okpuru ebe a, a na-anwale ọsọ saịtị ahụ site na iji ọnọdụ 10 na-eji Bitcatcha.
Site na nseta ihuenyo, wwere ike ịhụ na oge nzaghachi ihe nkesa ahụ dịgasị iche site na ọnọdụ gaa na ọnọdụ. Saịtị a gbara 8sọ (8ms) maka ihe nlere ule na United States ma bukwanu nwayọ maka oghere ule na Japan Japan (367ms na 414 ms).
Na nso ndị na-ege gị ntị nso nsebe sava gị nọ, ụ bụ obere ọrụ ọ bụ.
Gini simplu nsogbu eji egbu egbu?
Latitude bụ akụkụ ụfọdụ nke ntanetị gị na – ebu oge. Site-ul latency ịbawanye (ahọrọ ị nabata ndị na-ege gị ntị nso), oge itinye weebụsaịtị gị ga-aka nke ọma.
Gazda web Yabụ kedu kacha mma maka weebụsaịtị Marea Britanie?
Onye otu m simple nyocha latency na ụfọdụ ụlọ ọrụ nnabata nwere ụlọ ọrụ data dị na UK wee lelee ha dabere na ọnụahịa, atụmatụ na latency. Nsonazụ ule ya, SiteGround – ebe ww ebe ihe nkesa na London di, o so na ndi nnabata a nwere oke oso. Kinsta, n’aka nke ọzọ, na-arụ ọrụ na sava Google Google kwadoro na Londra (nke egosipụtara na ọsọ ọsọ).
(dacă Marea Britanie)
SiteGround Londra 34 SM 101 MS
PickAWeb Enfield 35 SM 104 MS
Ntaneti obi Leeds 37 SM 126 MS
HostingUK Londra, Maidenhead, Nottingham 41 SM 272 MS
tsoHost castitate 68 MS 582 MS
EUK Ọbịa Wakefield, Maidenhead, Nottingham 34 SM 634 MS
12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị Malaezia & Singapur